Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii Ugu Dambeeyay iyo Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO
Dagaaladii Ugu Dambeeyay iyo Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO
Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixinaya qaar kamid ah dagaaladii todobaadadii aan soo dhaafnay sida aadka uga socday wadanka Ogadenia. Dagaaladan ayaa lagu soo waramayaa in ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare aysan kasoo kabsan karin waligood oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo qalaba laga qabsaday. Dagaaladaa oon wada helin tirakoobka khasaaraha cadawga ayaa waxay u dhaceen inta nasoo gaadhay sidan.
15/2/15 Ceelo-obo oo Galaalshe katirsan dagaal aad uxoogbadan oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo kuwa Wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka daalan ee gumaysiga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
18/2/15 Duleedka Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob weerar aad ubalaadhan oo ay CWXO kuqaadeen ciidanka jaha wareersan ee gumaysigu ku uruuriyay Ogadenia waxaana rah maroodi ku istaagay laga dhigay ciidankii wayaanaha oo laga laayay askar badan oo uu kujiro nin Gaashaanle sare (kornayl) ah oo ciidankaas watay.
22/2/15 Duleedka Dagmada Galaalshe ee Gobolka Nogob dagaal faraha laysula tagay oo socday maalin dhan ayay fooda iskudareen sooma jeestayaasha CWXO iyo huubada uu gumaysigu ku qasbayo dagaalada waxaana cagta lamariyay ciidankii wayaanaha oo laga dilay inta lahubsaday 25 askari halka 30 kalana laga dhaawacay sidoo kale waxaa birta laga aslay taliyihii ciidanka gumaysiga oo lagu magacaabi jiray TILIQUU wuxuuna dagaalkaasu noqday mid ay ciidanka wayaanuhu kuqoreen buugooda taariikhda madow si aysan u hilmaamin.
1/3/15 Maygaago oo Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya loogu gaysta khasaare balaadhan oo aan lasoo faahfaahinin.
2/3/15 Ceel-xaar oo Dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan dagaal ay iskaga horyimaadeen CWXO iyo kuwa wayaanuhu waxaa ciidankii wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan